:::: Saxaabadii Rasuulka ::::
SomaliTalk | Denmark |
Bahda SomaliTalk waxay akhristayaasha qiimaha badan halkan ugu soo gudbinayaan casharro ku saabsan habnololeedkii saxaabadii Rasuulka (scw).
Hadda waxaa diyaar ah casharada hoose:
CASHARADA SAXAABADII RASUULKA
Taxanaha Habnololeedkii Saxaabada Rasuulka
Qoraaga habnololeedka Saxaabada
Waxaa duruustaas aadka u qiimaha badan soo diyaariyey (mahadi haka gaartee) Ibrahim Salah Aden oo degan magaalada Odense ee dalka Denmark.
Qoraaladaan iyo casharadani waxay kasbadeen magac aad u dheer oo ay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan cirifyada caalamka. Waxaana casharadaan lasocda akhristayaasha ugu badan ee akhrista bogga SomaliTalk.com.
Waxaan kudadaaleynaa, insha Allah, bini-Aadamku karo ama awooda in aan u soo daabacno casharadan. Dhankiina waxaan ka codsaneynaa in aad qoraaladaan aadka muhiimka u ah aad gaarsiisaan intii aad awoodaan.
Casharadan waxaad si fudud uga heli kartaan cinwaankan: www.Somalitalk.com/saxaabada. Haddaba fadlan haddii aad bog Internet ah leedahay kuxiriiri cinwaankan, haddii kale boggaan kudar bogaga kuugujira kambuyuutarkaaga oo aad sida sahalkaa ah u tegikartid, si aad taas u samaysid booqo bogga www.Somalitalk.com/saxaabada kaddibna guji ama taabo ama riix "CTRL-D" [Waa CTRL iyo D]
Bahda SomaliTalk waxay mahad aad u ballaaran u tebinayaan Ibrahim sida qiimaha leh ee uu usoo habeeyey barnaamijkan oo faa'iido weyn u leh mujtamaca Soomaalida ah iyo dhammaan Islaamka. Waxaa kale oo aan Ibrahim uga mahad celineynaa waqtiga qaaliga ah ee uu ku bixiyey qorida qoraaladan.
Waxaa kale oo aan mahad usoo jeedineynaa akhristayaasha SomaliTalk, kuwaas oo dhiirigelin weyn noo soo tebiyey sidii aan barnaamijkaan u hir gelin lahayn ama u sii wadi lahayn. Waxaan dhammaantiin idiin rajeyneynaa horumar iyo baraare iyo in aad ka faa'iidaan taariikhda wanaagsan ee saxaabadii rasuulka oo ku dayasho mudan.
Khayr farabadan ayaan ugu ducayney qoraaga iyo qofkii akhriya oo sii faafiya.
Waxaad qoraaga kala xiriiri kartaan:
Cusboonaysiin: April 1, 2004
Ibrahim waxa uu ku talajiraa, insha Allah, in uu Kitaab kaqoro qoraaladaan. Wixii talo iyo tusaale ah iyo su'aalaaha kusaabsan qoraaladaan waxaad u tebin kartaa Ibrahim oo aad kala xiriiri kartid emailka kor kuxusan.